Ukuguquka kwesimo sezulu kwenza abalimi badinge ubuchwepheshe obengeziwe | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuguquka kwesimo sezulu kanye nemiphumela yaso emibi ifinyelela ku ezolimo cishe kuzo zonke izingxenye nasemagumbini omhlaba. Kodwa-ke, sinobuchwepheshe obanele, okungenani okwamanje, ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu.
Isibonelo, sinobuchwepheshe besimanje njengokusebenzisa ezinye izinhlelo zokusebenza zeselula ezingadingi ukuxhumana kwe-inthanethi ukuthi kusetshenziswe. inika amandla abasomabhizinisi abancane ukuthi bakulungele kangcono ukubhekana nokuguquka kwesimo sezulu. Ngabe lobu buchwepheshe besimanje bususelwa kuphi?
1 Ubuchwepheshe besimanje
2 Imiphumela yokushintsha kwesimo sezulu kulinywa ikhofi
Kunentuthuko enkulu kwezobuchwepheshe enikela ekuthuthukiseni amandla okulima kwezolimo nokukwazi ukuzivumelanisa nezimo ezahlukahlukene ezibekwe ukuguquka kwesimo sezulu.Sinobuchwepheshe besimanje njengokusetshenziswa kwezinye izinhlelo zokusebenza zamaselula ezingadingi ukuxhumana kwe-inthanethi ukuthi kusetshenziswe inika amandla abasomabhizinisi abancane ukuthi bakulungele kangcono ukubhekana nokuguquka kwesimo sezulu
Enye yazo yi- Uhlelo Lwesixwayiso Sokuhlanzeka Ne-Phytosanitary seMesoamerica (Siatma) amazwe afana neGuatemala, iPanama neNicaragua asemukele ukuhlola umthelela emikhiqizweni ehlukene, njengekhofi. Lolu hlelo luqoqa idatha yokuziphatha kwezinambuzane, izinhlelo zokunisela, izidingo zezitshalo, nezinye izidingo zezolimo. Ibuye ibe nemodyuli yewebhu evumela ukulethwa kwayo yonke le datha ngendlela ehlelekile futhi eyenziwe lula ukuze ukuhlaziywa kwayo, ukutolika nokuqapha kusheshe.
Ngakho-ke, abalimi bangaba nemininingwane eminingi ngaphandle kwesidingo sokuxhuma kwi-inthanethi.
Imiphumela yokushintsha kwesimo sezulu kulinywa ikhofi
Ubhadane lwezifo oluthinta ukulinywa kwekhofi kungenxa enkulu yemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu. Phakathi kwale miphumela kukhona imijikelezo engeyona yezimbali nefungal esakazeka phakathi kwamasimu.
Isikhulu se-FAO ekomkhulu laso eRoma (e-Italy), wabamba iqhaza kwi-workshop nge-Innovations for the Inclusive Management of Agro-sanitary Risks ehambisana nokuguquka kwesimo sezulu ePanama City. Ngalo mhlangano wokusebenzela kungenzeka ukubhekana nezinkinga zobuchwepheshe ezikhona ukuze bakwazi ukufinyelela kubakhiqizi, imindeni, imiphakathi kanye nososeshini ukuze bakwazi ukuzilungiselela nokuzivumelanisa nemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu futhi ngaleyo ndlela banciphise ukuba sengozini kwabo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu kwenza abalimi badinge ubuchwepheshe obengeziwe